သင်၏ဓါတ်ပုံများကို iPhone နှင့် iCloud တွင်အမြဲတမ်းမည်သို့ဖျက်မည်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
Carmen rodriguez | | အိုင်ဖုန်းသတင်း, iCloud, iOS 8
အမျိုးမျိုးသောအထူးကုများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနောက်သင်ရှိမရှိသိရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်iPhone မှဖျက်လိုက်သောရုပ်ပုံအားလုံးဖယ်ရှားလိုက်ပြီ သို့မဟုတ်နေဆဲဖိုင်တွဲထဲမှာ။ သော့ "delete»ပုံတစ်ပုံလုံးကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ iPhone နှင့် Apple ၏ iCloud ဆာဗာများကိုသာဖော်ပြသည် ဤဖိုင်ကိုကူးရေးသည်အထိဖုံးကွယ်ပါ အခြားဒေတာအတွက်။
ပြနာကဒီပုံတွေကိုမင်းရဲ့ iPhone မှာမတွေ့နိုင်ပေမဲ့၊ တစ် ဦး In-depth ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး သင့်စက်ပစ္စည်း၏၎င်းတို့ကိုရှာနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည် iCloud တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုဒ်ကိုဖျက်လိုက်သည့်အခါပြောပြရန်ခက်ခဲသည်Apple ၏ဆာဗာများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 «ဓာတ်ပုံများ»မှ« Albums «မှမဖျက်သော
4 သင်သည်မည်သည့် backup ကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်
5 XNUMX- အဆင့်အတည်ပြုချက်ကိုသက်ဝင်စေ။
ဓါတ်ပုံအက်ပ်မှပုံများ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုအခြေခံသည် ဓာတ်ပုံများ သိုလှောင်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲမှာသည် အယ်လ်ဘမ်များ, လွှစသည်တို့ ဒါကြောင့်ငါတို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့မရှိမဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ပစ်ရမဲ့နေရာဟာဓါတ်ပုံတွေမှာပါ.
ဖျက်လိုက်သည့်ပုံသည်«ဖိုလ်ဒါတွင်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါမကြာမီကဖယ်ရှားခဲ့သည်"တည်ရှိပြီး အယ်လ်ဘမ်များစဉ်အတွင်း ပျောက်ကွယ်သည်အထိရက်ပေါင်း 30 လုံးဝ, ငါတို့ဤသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကိုလည်းအဲဒီမှာဖျက်ပစ်ပါ.
ဓါတ်ပုံများရှိဓာတ်ပုံကိုဖျက်ခြင်းသည်ဓာတ်ပုံများကို၎င်းတို့ပါ ၀ င်သည့်အယ်လ်ဘမ်တွင်သာကျန်ရှိနေသေးသည်။ သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံကိုတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်မျှဝေလျှင် ပုံကို Cloud မှာသိမ်းထားတယ် ကြည့်ရှုရန်မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုများအတွက်။ သင်၏ iCloud သိုလှောင်မှုနေရာတွင်နေရာမယူပါ သင်တစ် ဦး ရှိပါကပေမယ့် 5.000 ပုံကန့်သတ် shared, သင်အသစ်များကိုထည့်သွင်းရန်မဆိုဖျက်ပစ်ရန်တောင်းခံရသည့်အနေဖြင့်။
သူတို့ကိုသင်တွေ့နိုင်တယ် ကန့်သတ်ချက် Photo Stream နှင့် iCloud Photo Sharing ထဲမှာ ပန်းသီးစာမျက်နှာ.
သင့်ရဲ့ iPhone ကိုပြုလျှင် ဝိုင်ဖိုင်နှင့်ဝန်းကျင်တွင်အစာကျွေးသောအခါ၊ ဒီမိတ္တူပါဝင်သည် အားလုံးပုံရိပ်တွေ တိုတိုပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဟာ terminal ရဲ့ backup ထဲမှာရှိနေတုန်းပဲ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုချိုးဖောက်သောကြောင့်သင်လုံးဝဖျက်လိုသည့်ဓာတ်ပုံရှိပါကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ အဟောင်းကို backups များကိုဖျက်ပစ်ပါ.
အရန်တစ်ခုကိုပယ်ဖျက်လိုပါက၊ setting များကို > iCloud > သိုလှောင်မှု > သိုလှောင်မှုကိုစီမံပါထို့နောက်သင်ဖျက်လိုသည့်ကိရိယာနှင့်အရန်ကူးများကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ဓာတ်ပုံများအားနောင်တွင်ကူးယူခြင်းမှတားဆီးပါ လုံခြုံရေး, ဒီ option ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
သင်သည်မည်သည့် backup ကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်
iCloud သည်အလွန်ကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်းဓာတ်ပုံဝေမျှသည့်ရင်းမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်တော့မဟုတ်ပါ ပတ္တမြား လိုအပ်သော။ အဘို့ iCloud ထပ်တူပြုခြင်းကိုပိတ်ပါ ဓာတ်ပုံတွေအတွက်၊ setting များကို > iCloud > ဓာတ်ပုံများ နှင့် Cloud ပေါ်မူတည်သော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။
သင်၎င်းကိုပယ်ဖျက်သောအခါ၊ သင့် iPhone မှ streaming ဓါတ်ပုံများကိုဖျက်ပစ်ခြင်းကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့ရှာဖွေနေသည်
၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိ၊ သုံးစွဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည် လုံးဝအကြံပြုသည် အကယ်၍ သင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်အားဒေါ်လာအနည်းငယ်ဖြင့်ရောင်းချပြီးသောကြော်ငြာကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ရောင်းချသောဟက်ကာအချို့လက်ထဲသို့မရောက်စေလိုပါကသို့မဟုတ် ပို၍ ဆိုးသည်မှာသင်သည်လိမ်လည်ခြင်း၊ шантажခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကူး။ ရသောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iCloud » သင်၏ဓါတ်ပုံများကို iPhone နှင့် iCloud တွင်အမြဲတမ်းမည်သို့ဖျက်မည်နည်း
နောက်ဆုံးစာပိုဒ် "အတည်ပြုချက်ကိုအဆင့် ၂ ဆင့်ဖြင့်သက်ဝင်စေပါ" ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားရှင်းပြပါ။ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ကူးထည့်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ🙂
ကျွန်ုပ်၏ iPhone5တွင်ကျွန်ုပ်အကြာကြီးရိုက်ခဲ့သောဓာတ်ပုံများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌အမှိုက်ပုံးမရှိတော့ပါ။ ၎င်းတို့ကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ငါလိုချင်တာက iPhone roll ထဲကဓါတ်ပုံတွေကို iCloud ထဲမှာသိမ်းထားလိုက်တာနဲ့ iPhone မှာသိုလှောင်မှုပိုများလာတယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါဓာတ်ပုံများကိုလည်းဖျက်လို့မရပါဘူး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှဓာတ်ပုံအချို့တွင်အမှိုက်များကျွန်ုပ်မရရှိနိုင်ပါ။ သင်မည်သို့ဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့သနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာမှ iPhone သို့လွှဲပြောင်းထားသောဓါတ်ပုံများကိုဖျက်ချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းတွင်သိုလှောင်ရန်နေရာပိုများပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jhon Jairo Jaramillo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောည၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြproblemနာတစ်ခုအားကျွန်ုပ်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone 5s မှဓါတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းမှချက်ချင်းဖျက်ရန် cut option ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ pc သို့ကူးယူပြီးဖြစ်သည်။ local disk ကိုပြောပြီးငါ့ကိုဖျက်လို့မရတဲ့ဖိုင်တွဲတွေဒါမှမဟုတ်အိုင်ကွန်တွေ။ ဤပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်နေရာယူထားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Jhon Jairo Jaramillo အားစာပြန်ပါ
Jorge Luis ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် iPhone5နှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဓာတ်ပုံအချို့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ဖျက်လိုသည့်အခွင့်အရေးမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် PC မှတဆင့်ဝင်သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖျက်လိုသောအခါ၎င်းကကျွန်ုပ်ကိုခွင့်မပြုပါသို့မဟုတ်ခွင့်မပြုပါ။ နောက်ထပ်သီချင်းတွေကိုကူးယူဖို့ငါ့ကို
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာမှကျွန်ုပ် iPhone သို့မည်သို့ကူးပြောင်းခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖျက်နိုင်ကြောင်းသိလိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏အိုင်ကွန်ကို၎င်းတို့ကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ငါ streaming ကနေဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တွင် iPhone5နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဓာတ်ပုံအချို့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ဖျက်လိုသည့်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် PC မှတဆင့်ဝင်ရောက်သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖျက်လိုသောအခါ၎င်းကကျွန်ုပ်အားခွင့်မပြုပါ။
Yuliet Mora Garcia ဟုသူကပြောသည်
ငါကြိုက်တယ်သူတို့ကငါ့ကိုကူညီလိမ့်မယ်! Drive မှတဆင့်အရန်ကူးမိတ္တူတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်ဖျက်လိုပြီးကျွန်ုပ်၏ဖုန်းရှိကျွန်ုပ်၏ပြခန်းတွင်ဆက်လက်မလုပ်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အား၎င်းတို့ကို Drive မှဖျက်လိုက်သည်။ သူတို့သည်ပေါ်လာခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ပြခန်းထဲတွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ငါဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများကိုစမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြခန်းတွင်ထပ်တူဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအကူအညီလိုတယ် !!! မေတ္တာဖြင့်
Yuliet Mora Garcíaအားပြန်ပြောပါ
MARIO MENDEZ GARCIA ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ဓါတ်ပုံများကို Cloud တွင်ဖျက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး ilcoud နှင့်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းတွင်ဘာမျှမထွက်ပေါ်လာပါ။
MARIO MENDEZ GARCIA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ထရေဇာ M ဟုသူကပြောသည်
တိုက်ခိုက်ခံရသည့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးအားသင် pc သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့် Icloud ကိုယ်တိုင်နှင့် Iphone မှနေရာလွတ်ရန်အတွက်နည်းလမ်းမရှိသလား။ ကျွန်တော်မယုံဘူး!
Teresa M အားပြန်ပြောပါ
နှိုင်းယှဉ်မှု Nexus6နှင့် iPhone 6, တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားရင်ဆိုင်ရဖို့ခြော
အခုဆိုရင် Pangu8 နဲ့ iOS 8.1 ဒါမှမဟုတ် iOS 8 ကို jailbreak လုပ်နိုင်ပါပြီ